Voucherify: Mepụta nkwalite ahaziri onwe ya site na iji atụmatụ efu nke Voucherify | Martech Zone
Nyochaa bụ API-mbụ nkwalite na iguzosi ike n'ihe njikwa Software nke na-enyere aka ịmalite, jikwaa, na soro mkpọsa nkwado ahaziri iche dị ka Kupọns mbelata, nkwalite akpaaka, kaadị onyinye, sweepstakes, mmemme iguzosi ike n'ihe, na mmemme ntinye aka.
Nkwalite ahaziri ahazi, kaadị onyinye, inye onyinye, iguzosi ike n'ihe, ma ọ bụ mmemme ntugharị aka dị mkpa karịsịa n'oge mmalite nke uto.
Ndị mbido na-alụkarị ọgụ maka inweta ndị ahịa, ebe ibipụta Kupọns ego ahaziri ahazi, nkwalite ụgbọ ibu ma ọ bụ kaadị onyinye nwere ike dị mkpa iji dọta ndị ahịa ọhụrụ.
Ihe karịrị 79% nke ndị ahịa US na 70% nke ndị na-azụ ahịa UK na-atụ anya ma nwee ekele maka ọgwụgwọ onye ọ bụla na-abịa na ahụmịhe e-azụmahịa ahaziri nke ọma.
Dị ka ndị ahịa isi mmalite mmalite na-adịkarị ala, iwe iwe bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ a. Ịmalite nkwalite ụgbọ ibu na ngwugwu ngwaahịa nwere ike inye aka na iwe iwe nke ukwuu.
Mmemme ntụnye aka dị mkpa iji wepụta okwu ahụ ma nwee ike ịbụ injin uto maka mmalite nwere nnukwu ngwaahịa mana ọhụhụ dị ala (Ike OVO, dịka ọmụmaatụ, jiri atụmatụ a banye n'ahịa ọhụrụ).
Ntugharị ahịa na-esite na 3 ruo 5 ugboro dị elu ọnụego mgbanwe karịa ọwa ahịa ọ bụla ọzọ. 92% nke ndị ahịa tụkwasịrị ndụmọdụ ndị enyi ha na 77% nke ndị ahịa dị njikere ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ jiri ọrụ onye ha maara tụrụ aro.
Nielsen: Tụkwasị na Mgbasa Ozi
Nke a bụ isi iyi bara uru nke ndị ahịa ọhụrụ, ọkachasị maka azụmaahịa niche.
Mmemme iguzosi ike n'ihe nwere ike ịdị ka oke oke maka ụlọ ọrụ mmalite mana enweghị otu, ha na-etinye ihe egwu na-efunahụ ndị ahịa ha na-etinye nnukwu mbọ na ego iji nweta. Ọzọkwa, ọbụna 5% na-abawanye na njigide nwere ike iduga dị ka 25-95% mmụba na uru.
Voucherify ka ewebatala a atụmatụ ndenye aha n'efu. Nke a bụ nnukwu ohere maka mmalite na SME iji malite nkwalite akpaaka, ahaziri onwe ya ma melite nnweta na njigide ndị ahịa n'efu, yana itinye ego oge kacha nta. Atụmatụ efu ahụ gụnyere atụmatụ niile (ma ewezuga geofencing) yana ụdị mkpọsa, gụnyere nkwalite ahaziri onwe ya, kaadị onyinye, sweepstakes, ntụaka, na mkpọsa iguzosi ike n'ihe.
Obi dị anyị ụtọ ịmalite ịnye atụmatụ ndenye aha n'efu. Anyị kwenyere na ọ ga-enyere ọtụtụ ndị mmalite na SMBE aka ịmalite ịmalite uto ha na anyị nwere obi ụtọ isonye na ya. Ndị nrụpụta wuru Voucherify, maka ndị mmepe na anyị nwere obi ụtọ ịnye teknụzụ ọgbara ọhụrụ maka ụdị ụlọ ọrụ niile, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala maka ha.
Tom Pindel, CEO nke Voucherify
Atụmatụ Voucherify efu na-egosipụta ihe ndị a
Ọnụọgụ mkpọsa na-akparaghị ókè.
100 API oku/awa.
1000 API oku/ọnwa.
1 oru ngo.
1 onye ọrụ.
Nkwado obodo Slack.
Ịbanye ọrụ onwe onye na ọzụzụ onye ọrụ.
Otu ihe atụ nke mmalite nke toro site na iji Voucherify bụ Ndị Tutti. Tutti bụ mmalite sitere na UK nke na-enye ikpo okwu maka ndị na-emepụta ihe ebe ha nwere ike ịgbazite oghere maka mkpa okike ọ bụla, ma ọ bụ mmeghari, nlegharị anya, foto foto, ịse ihe nkiri, iyi ndụ, ma ọ bụ ndị ọzọ. Tutti chọrọ ịmalite mmemme ntụnye aka na mgbasa ozi nkwado iji kwalite nnweta ha wee chọọ ngwọta sọftụwia nke ga-abụ API-nke dabara na ụkpụrụ ụlọ dabere na microservices ugbu a nke na-eji nyiwe API dị iche iche, dị ka. straipu, nke, ActiveCampaign.
Ha họọrọ iso Voucherify gaa. Ha nyochara ndị na-eweta ngwanrọ API ndị ọzọ mana ha nwere ọnụ ahịa dị elu karịa Voucherify ma ọ bụ enyeghị ihe ngosi nkwado niile na ngwugwu bụ isi. Njikọ ya na Voucherify were ụbọchị asaa maka Tutti, na-enwe ndị injinia ngwanrọ abụọ n'ụgbọ mmiri, gụpụtara site na mmalite nke ọrụ na ntinye aka ruo mgbe enwere ike ịmalite mkpọsa mbụ. Ekele maka Voucherify, mmasị na onyinye ha mụbara na ndị otu ha jisiri ike nweta mgbasa ozi ekele maka inye ndị ọrụ ebere ego na ndị na-amalite ịmalite.
Nyefee akwụkwọ gbasara ihe ọmụmụ Tutti
Ị nwere ike ịchọta ntụnyere zuru ezu nke atụmatụ ndenye aha na oke ha na Voucherify ibe ọnụahịa.
Nyochaa bụ nkwalite API-centric na ngwanrọ njikwa iguzosi ike n'ihe nke na-enye agbamume ahaziri onwe ya. Emebere Voucherify iji mee ka ndị otu na-ere ahịa nwee ike ịmalite ngwa ngwa na nke ọma jikwaa kupọọnu ahaziri ahazi yana nkwalite kaadị onyinye, onyinye onyinye, ntụnye aka na mmemme iguzosi ike n'ihe. N'ihi API-nke mbụ, enweghị isi wuru na ọtụtụ ntinye aka na-adịghị na igbe, Voucherify nwere ike ịmekọrịta n'ime ụbọchị, na-ebelata oge ịre ahịa ma na-ebelata ọnụ ahịa mmepe.
Ihe mgbochi ụlọ mmemme na-enyere aka ijikọ mkpali na ọwa ọ bụla, ngwaọrụ ọ bụla, na ngwọta e-azụmahịa ọ bụla. Dashboard enyi na enyi na-ere ahịa site na ebe ndị otu ahịa nwere ike ịmalite, melite ma ọ bụ nyochaa mgbasa ozi nkwado niile na-ewepụ ibu ahụ n'otu mmepe ahụ. Voucherify na-enye injin iwu na-agbanwe agbanwe iji kwalite ngbanwe gị na ọnụego njide na-agbaghị mmefu ego nkwalite.
Voucherify na-enye ụlọ ọrụ nke nha niile aka imeziwanye ọnụego ha nwetara, njide na ngbanwe dị ka e-azụmahịa Giants na-eme, na ntakiri nke ọnụ ahịa. Dị ka ọ dị taa, Voucherify enwetawo ntụkwasị obi nke ndị ahịa 300 (n'ime ha Clorox, Pomelo, ABinBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, ma ọ bụ Bloomberg) ma na-ejere ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa ozi site na ọtụtụ puku mgbasa ozi mgbasa ozi gburugburu. ụwa.
Gbalịa Voucherify n'efu
Tags: agileonenkwalite akpakaego Kupọnsnkwalite n'efukaadị onyinyeiguzosi ike n'ihe omume apiiguzosi ike n'ihe mmemmenielsenapi nkwaliteOzi Ntuziakankenchịkọtatom pindelnyegharịa